သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, pictures, ratings, reviews and discusssions | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, pictures, ratings, reviews and discusssions
Kawasaki Ninja 650R 2012 အိန္ဒိယတွင်စျေး – အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Bajaj အော်တိုအားလုံးကိုအသစ်ကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် 2012 အဆိုပါ Kawasaki Ninja 650R အထူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြိုင်ပွဲ၏ထုတ်ဝေပြီးခဲ့သည့်အပတ်က. သင်၏ရှင်ဘုရင်သည်သတင်းအချက်အလက်အတွက် Bajaj ယခုအချိန်အထိရောင်းချပြီ 3,000 အဆိုပါ Ninja မိသားစုထဲမှာယူနစ်, ပထမဦးဆုံးအရာနှစ်အတွင်းစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည့် 2009. နောက်ဆုံးပေါ် 2012 မော်ဒယ်ဇွန်လအတွက်မိတ်ဆက် Ninja 650R ၏ပစ်လွှတ်အောက်ပါအတိုင်း 2011. ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုသိသည့်အတိုင်း, အဆိုပါ Kawasaki ရူပီးအကြားအရွယ်ရှိအဆိုပါအားကစားစက်ဘီးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်2သို့5တစ်ဦးကစျေးကွက်ဝေစုနှင့်အတူသိန်း 65 ရာခိုင်နှုန်းကို. ဒါက Kawasaki Ninja 250R နှင့် KTM ပြီးနောက်နိုင်ငံအတွင်းရှိမိတ်ဆက်တတိယပရီမီယံအားကစားမော်တာဆိုင်ကယ်ဖြစ်ပါတယ် 200 Duke. အဘယ်သူမျှမသံသယက၎င်း၏စတိုင်နှင့် configuration ကကုန်ကျစရိတ်ထက်ကျော်လွန်သွားပါလိမ့်မယ်. Kawasaki Ninja 650R 2012 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် four-လေဖြတ်, အရည်-အအေး, DOHC, လေးအဆို့ရှင်, အပြိုင်အမွှာအင်ဂျင်ကို 649 cc ရွှေ့ပြောင်းခံရ 72 ဆာ @ 8500 RPM အများဆုံးပါဝါ 66 nm torque @ 7000 RPM အများဆုံး torque နှစ်ခု 38mm Keihin အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာကောင်များနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်လောင်စာထိုး 83.0 မီလီမီတာဆလင်ဒါထွင်းဖေါက်ခြင်းနှင့် 60.0 စတုတ်မီလီမီတာ 11.3:1 ချုံ့အချိုးအစား အီလက်ထရောနစ်ကြိုတင်စက်နှိုးအတူ TCBI 15.5 ltrs လောင်စာစွမ်းရည် ကိုယ့်ကိုယ်ကို Start အတူအလွိုင်းဘီး 1410 မီလီမီတာဘီးအခြေစိုက်စခန်း ရှေ့ -120 / 70-17 ZRI7M / ကို C (58W က), နောက်ဘက်-160 / 60 - 17 ZRI7M / ကို C (69W က) အဝတ်အစား6မြန်နှုန်းဂီယာသေတ္တာ dual 300 နှစ်ခုပစ္စတင် calipers ဘရိတ်နှင့်အတူမီလီမီတာ tripe ပွင့်လွှာရှေ့ disc ကို တခုတည်းသော 220 တစ်ခုတည်းပစ္စတင် caliper ဘရိတ်နှင့်အတူမီလီမီတာပွင့်လွှာနောက်ဘက် disc ကို 41 မီလီမီတာအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းချိတ် / 120 မီလီမီတာရှေ့ရပ်ဆိုင်းမှု ဤသည်၏ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းအလေးချိန်ရှိခြင်းတစ်ဦးစတိုင်ဆိုင်ကယ်ဖြစ်ပါတယ် 460.8 ပေါင်နှင့် 31.7 ထိုင်ခုံ ...
2009 ဟွန်ဒါ CB1000R လမ်းမကြီးစမ်းသပ်ခြင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း- ဟွန်ဒါ ...
2009 ဟွန်ဒါ CB1000R - လမ်းမကြီးစမ်းသပ်မှုတားမြစ်ပျော်စရာ: သငျသညျမဝယ်နိုင်အကောင်းဆုံးဟွန်ဒါ! အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့ကောင်းတဲ့ရဟတ်ယာဉ်ကိုတည်ဆောက်ဘို့ဟွန်ဒါဖို့ကျားကန်. ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုအစဉ်အဆက်အလွယ်ကူဆုံး-to-စီးနင်း Full-size ကို Two-ဘီးတဦးဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်တစ်ခု Auto-Trans-တပ်ဆင်ထားမော်တော်ဆိုင်ကယ် / Scooter ကဲ့သို့သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိရိယာတစ်ခုပေးခြင်းများအတွက်ဗိုလ်မှူးအကြွေး. ဒါပေမဲ့, ရိုးရိုးသားသား, ဟွန်ဒါ, သင်သည်အဘယ်ကြောင့်အကြှနျုပျတို့ကိုထုတ်ကိုင်ပြီးနေကြတယ်? စည်းချက်မြန်အီလက်ထရွန်နစ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဥရောပတိုက်တွင်ယင်း၏နိဒါန်းပေါ်မှာ CB1000R ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်. တကယ်တော့, ဒီ CBR1000RR-based အဝတ်အချည်းစည်းစက်ဘီး 2008 ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစက်ဘီးစီးတစ်နှစ်တာမဲပေးအတွက်ဒုတိယပြီးဆုံး, အဆိုပါ U.S နှင့်ကျွန်တော်. သူစက်ဘီးဆုံးရှုံးနေကြပင်ထိုသို့မဲပေးရမပြုခဲ့! ဥရောပကျမ်းပြုဆရာထံမှတချို့ကမှတ်သားလောက်ကိုးကား? အချည်းစည်းအမျိုးအစားထဲမှာဟွန်ဒါအတွက် "တစ်ဦးကဧရာမခြေလှမ်း,"ဆိုင်ကယ်ယမ်ကပြောပါတယ်. "ရှင်းနေသည်မှာယင်း၏အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောအင်ဂျင်နှင့်အတူပြိုင်ဘက် outshines, ကောင်းသောဘရိတ်များနှင့်ချွန်ထက်ကိုင်တွယ်။ " ချီးမွမ်းခြင်းအညီအမျှအပြည့်အဝဘယ်လ်ဂျီယံရဲ့မော်တော် Wereldwere မှာအယ်ဒီတာများ, သူတို့တစ်တွေယူထားတဲ့စတင်မှပယ်ရလျှင်ပင်: "နံပါတ်များခုနှစ်တွင်, အဆိုပါ CB1000R သင်တို့ခြေအောက်၌ကနေကော်ဇောခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့ကြောင့်ဆိုင်ကယ်၏အတိအကျမျိုးမဟုတ်ပါဘူး. ဤသည်အင်ဂျင်နှင့်ကိုယ်ထည်နှစ်ဦးစလုံးသက်ဆိုင်ဖြစ်ပါသည်. သို့သျောလညျး, သင်တစ်ဦးထုမျှမျှတတဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါရဲ့အငယ်ဆုံးအဝတ်အချည်းစည်းအမှန်တကယ်ဖြစ်ပါသည်ရုံသောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်စေသည်စီးနင်း; တိကျသောအထိဖြည့်စွက်တဲ့ချိန်ခွင်လျှာ, လွယ်ကူပြီးပျော်စရာကိုင်တွယ်. တစ်ဦး torquey အတွက် factor, အဲဒီမှာချိုမြိန်-running အင်ဂျင်နှင့်ထိုသို့, ယခုနှစ်စက်ဘီး thenaked ။ " ဒါကြောင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ပျော့သွားတာကိုအကြောင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ဥရောပမှလေယာဉ်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်အဘယ်အရာကိုကိုယျ့ကိုယျကိုအဘို့အကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်. ကျနော်တို့ဟွန်ဒါသြစတြီးယားထဲကတစ်ဦးဆိုင်ကယ် finagled နှင့် ...
ပြောက်: Moto Guzzi Norge အဆိုပါ Moto Guzzi Norge အချို့သောအချိန်များအတွက် Tour စက်ဘီးငါ့အသိအမြင်၏အစွန်အဖျားပေါ်မှာခဲ့သည်. စျေးကွက်အပေါ်ပိုမိုဒီကဗျာမော်ဒယ်များတစ်ခုမှာ, ဒါကြောင့်လည်းအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်အများဆုံးလက်တွေ့ကျတဲ့တဦးဖြစ်ဖြစ်ပျက် - အပြင်းထန်ဆုံးတဦးလည်းပါလျှင်. သစ်တစ်ခုမော်ဒယ်ဒီအတိတ်တစ်နှစ်ဖြန့်ချိမှုနှင့်အတူ, ခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲမှာ Moto Guzzi ထားရန်မဆုတ်မနစ်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, အဆိုပါ Norge ပင်ယနေ့လူစည်ကား Tour ဈေးကွက်ထဲမှာလျစ်လျူရှုရန်မဖြစ်နိုင်ပေ. အများအပြားအီတလီမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကုမ္ပဏီကြီးများလိုပဲ, Moto Guzzi ယင်း၏အမွေအနှစ်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဂုဏ်ယူဖြစ်ပါသည်, နှင့် Norge တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အထူးတဦးတည်းရှိတယ်. ဒါဟာ GT ကို Norge ပြီးနောက်အမည်ရှိ, ကုမ္ပဏီ၏သဲ 1928 မော်ဒယ် - မြောက်ကိုရီးယားဝင်ရိုးစွန်းကျော်ပျံသန်းဖို့ပထမဦးဆုံးသော airship များအတွက်အမည်ရှိသူ့ဟာသူ. အဆိုပါ 500cc GT ကို Norge နော်ဝေရဲ့ Lapland မှကုမ္ပဏီ၏အီတလီရုံးချုပ်ကနေ 4000 မိုင်စမ်းသပ်စီးနင်းပြီးစီး, အာတိတ်စက်ဝိုင်း၏အတွင်းပိုင်းအစွန်းပေါ်. ဒါဟာကျနော်တို့တောင်မှယနေ့ထားတဲ့မော်ကွန်း Cross-တိုက်ကြီးခရီးအဖြစ်ခွဲခြားချင်ပါတယ်စီးနင်းများ၏ကြင်နာမယ့်, နှင့် 1928 က ပို. ပင်ဒါလမ်းများ၏ပြည်နယ်ပေးထားခဲ့သည်. အဆိုပါကုမ္ပဏီသက်သေပြနေတဲ့အချက်ခဲ့: သူတို့ရဲ့နောက်ဘက် swingarm ရပ်ဆိုင်းမှု setup ကို - က၎င်း၏မျိုး၏ပထမဦးဆုံး - အလုပ်, နှင့်မဟုတ်ရင်ခံသာဖြစ်ကြသည်ထက် သာ. ကြီးမြတ်အကွာအဝေး၏ခရီးကို enable နိုင်. အင်ဂျင်နီယာ Guiseppe Guzzi လေးပတ်အတွင်းခရီးစဉ်ကိုဖန်ဆင်း. အဆိုပါ Norge အတွက်ပြန်လည်ထိတွေ့ပေါ်လွင်လာသည့်အခါ 2005, ဒါကြောင့်လေတိုက်-ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း-ဒီဇိုင်းတရားမျှတပြီးခေတ်မီ v-အမွှာအင်ဂျင်နှင့် accoutrements နှင့်အတူပေါ်ထွက်လာ, နှင့်အလွန်တူညီစီးနင်းပြီးစီး. ရည်ရွယ်ချက်၏ကြေညာချက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခဲ့သည်, ကမပါဘဲမဟုတ်ခဲ့သော်လည်း ...
2009 Kawasaki Vulcan Voyager 1700 ဆန်းစစ်ခြင်း & # ...
2009 Kawasaki Vulcan Voyager 1700 | ဆန်းစစ်ခြင်း high-Tech မှ Classic အဝေးပြေးလမ်းမကြီးကနေတစ်ဦးခြောက်နှစ်ခွင့်ပြီးနောက်, Kawasaki အဆိုပါနည်းပညာအရှေ့သို့နှင့်အတူအပြည့်အဝစားဆင်ယင် Tour စျေးကွက် reentering ဖြစ်ပါတယ်, လွမ်းဆွတ် style, 2009 Voyager. Kawasaki သူတို့ရဲ့သစ်ကို Vulcan touting ဖြစ်ပါတယ် 1700 အဆိုပါ Cruiser အစိတ်အပိုင်းအတွက်ကုမ္ပဏီရဲ့အနာဂတ်များအတွက် bellwether အဖြစ်စီးရီး, နှင့် reimagined Voyager သူတို့ရဲ့အပျော်စီးလိုင်းရဲ့ luxe အထင်ကရအဖြစ်တာဝန်ထားပြီး. ၎င်း၏ရှည်လျားသော-လေဖြတ် 1700cc V-အမွှာအင်ဂျင်နှင့်မရှောင်သာ '' 60 ကြွက်သားကားတစ်စီးပုံစံ riffs နှင့်အတူ, the 1700 Voyager အတွက်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကျော်ပျောက်ကွယ်သောအင်လိုင်းလေး Voyager XII တစ်ပြာအမေရိကန်ဝမ်းကွဲဆင်တူ 2003. အဆိုပါ Voyager ရဲ့အသစ် Occidental ဗီရိုက-အမည်ရယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဖြင့်ကျန်ရစ်တဲ့ပျက်ပြယ် exploit ပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်တဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ Kawasaki ရဲ့မဟာဗျူဟာထဲမှာအမြင်အာရုံချိတ်ဖြစ်ပါသည်, high-tech မက်ထရစ် V-အမွှာစွမ်းအင်သုံး, Full-စားဆင်ယင် Cruiser. အဆိုပါခရီးစဉ်အစိတ်အပိုင်းရဲ့လက်ရှိတိုးတက်မှုနှုန်းလမ်းကြောင်းဆိုင်ကယ်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ခြုံငုံရောင်းအားကျဆင်းမှု၏ဆွဲငင်အား defies, နှင့် Kawasaki Thar saddlebags သူတို့ကိုတစ်ခါသုံးဝင်ငွေရှုမြင်. အဆိုပါကုမ္ပဏီအရောင်းပြခန်းကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတစ်ကြွက်သားအသစ်အမိုင်-စားချင်သောသူ၏ပယင်းကျဆင်းမှုဆန့်ကျင်သည်၎င်း၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားအားကောင်းလိမ့်မည်ဟုအလောင်းအစားဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါ Vulcan ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ 1700 စီးရီး (အရာကိုလည်းအကျွမ်းတဝင်ဂန္ထဝင်ပါဝင်သည်, ဂန္ထဝင် LT နဲ့ခြေသလုံး) ထိပ်တန်း-Down ကြိုးစားအားထုတ်မှုခဲ့, စပိုင်းတွင် Voyager အာရုံစိုက်. အဆိုပါ Voyager ရဲ့ဟောင်းများကိုကြည့် / သစ်ကိုနည်းပညာပေါင်းစပ်အကယ်စင်စစ်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းမှာအောင်မြင်. Gone နှင့် (အများဆုံးရပ်ကွက်အတွင်းရှိ) unlamented အဆိုပါ pointy ထောင့်များမှာ, ဖုံးကွယ်အင်ဂျင်ကို, boxy ...
ဟွန်ဒါမှခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 1960...
Honda 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 အဆိုပါဟွန်ဒါ RC166 အပေါ်ဆက်ဖတ်ရန် 250/6. Grand Prix ပြိုင်ကားအစောပိုင်း 1960 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးတော်လှန်ရေးခံယူ. ဟွန်ဒါရဲ့ခြောက်ဆလင်ဒါလျင်မြန်စွာစုဝေးရောက်လာကြ၏. အဆိုပါဟွန်ဒါ RC166 ခြောက် Cylinder ၏အသံထွက်ကိုစစ်ဆေးပေါင်း crank အောက်က link ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု. တချိုမြိန်အသံဆိုင်ကယ်ဖြစ်ပါတယ်. ငါမရောက်မှီအလယျပိုငျး-အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်နှစ်ပေါင်းအပေါ်တဦးတည်းကိုကြား. ဒါဟာကိုစေလွှတ်. Le Mans ပေါင်းထုတ်လုပ်မှုစက်ဘီးဖို့ရော်ဘာအဖြစ်. ဟွန်ဒါသင်္ဘောခြောက်ဆလင်ဒါ DOHC ယင်း၏နဲ့အဖြစ်မှန် powerplant စေသွားလေ၏. ဟွန်ဒါနှင့်အတူ 1960 ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေတဲ့. တစ်ဦး 50 cc သုံးဆ, တစ်ဦး 125 cc ခြောက်လဆလင်ဒါပေါင်းတစ် V8. အခုသူတို့အချို့ရှိ5အဆိုပါဟွန်ဒါခြောက်လထက်မြင်းများကိုပိုမို. ၏ RC166 1967 ကဲ့သို့တူညီသောဆိုင်ကယ်ဖြစ်ပါတယ်. 1960 pt2 ၏အဖြစ်ဟွန်ဒါ RC166 ခြောက်ဆလင်ဒါဆိုင်ကယ်: ဟွန်ဒါ RC166 သတင်းအချက်အလက်: ဟွန်ဒါ RC166 နောက်ခံများ. ဟွန်ဒါ RC166 အကြောင်းကိုကြေးနန်း. အမည်ပြောင်: မှတ်ချက်: ၏အဖြစ် 1960, ဟွန်ဒါဝင်ကြ၏. ဂျပန်ပြိုင်ကားစက်တွေခြောက်ဆလင်ဒါရက်ရက်ရောရောခဲ့ကြသည်. တစ်လမ်းပေါင်းပြိုင်ပွဲစက်ဘီးအကြားသတ်မှတ်ချက်အတွက်ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ခဲ့သည်. အကျင့်ကိုကျင့် Motocross စက်ဘီးများအတွက်. ဟွန်ဒါစူပါမွမ်းမံထားသောဆိုင်ကယ်အတွက်၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ကယ်မဝင်ရစတင်.4တစ်ခုချင်းစီကိုဆလင်ဒါအဘို့အဆို့ရှင်: RC143: 1960: အမွှာပူး: 44 × 41 မီလီမီတာ: 124.68 cc (8. ခြောက်နှင့်အတူဟွန်ဒါရဲ့ပထမဆုံးထုတ်လုပ်မှုမော်တော်ဆိုင်ကယ်ခဲ့သည်. ဟွန်ဒါခြောက်လဆလင်ဒါနှင့်အတူတည်ဆောက်သောပထမဦးဆုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များတွင်အသုံးပြုခဲ့သည့် RC166 250cc ပြိုင်ပွဲစက်ဘီးခဲ့သည်. ဟွန်ဒါပြိုင်ကား – အပိုင်း 1. ဟွန်ဒါပြိုင်ကား 1960 ;. ဟွန်ဒါ 250cc RC166. အသစ်တစ်ခုကိုခြောက်လဆလင်ဒါပုံပေါ်. ဒီဆိုင်ကယ်ကတော့ RC166 ထက်သိသာ သာ. ကြီးမြတ်သည်ပုံရသည်. ဟွန်ဒါ RC166 ဖုန်းမြည်သံ. ဤအချိန်ကသူ Mike Hailwood င် ...
ပွိုငျဘမော်တော်ဆိုင်ကယ် အဆိုပါ Marque ၏သမိုင်းအကျဉ်း: ပွိုငျဘ အဆိုပါ Collier ကညီအစ်ကိုတွေအတွက်သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးစက်ကိုတညျဆောကျ 1899, က 1907 အဆိုပါကျွန်းက Man TT ၏လူမျိုးမှာအနိုင်ရခဲ့သည်. တစ်စက္ကန့်ရာအရပျကအောက်ပါ 1908, သူတို့နောက်တဖန်အနိုင်ရ 1909 and 1910. ပထမကမ္ဘာစစ်ထုတ်လုပ်မှု JAP နှင့် MAG နှစ်ဦးစလုံးထံမှအင်ဂျင်ကိုသုံးပြီးပြန်လည်စတင်ပြီးနောက် . Fri, May 24 2013 duhoda76wanadoo.fr ပြိုင်ပွဲပြင်သစ် jmpot ဗီဒီယိုကိုဗီဒီယိုက ပြင်သစ် april 2013 ကောင်းသောနေ့, ငါ့နာမကို JT Davis ကဖြစ်ပါတယ်, ငါဥဩမီဒီယာမှာတွဲဘက်ထုတ်လုပ်သူပေါ့ကျနော်တို့ငါးမိုင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပါလီမန်အဆောက်အထံမှတည်ရှိသည်. ကျနော်တို့သူကိုပြုပြင်ရေးနှင့်ပြုပြင်စပျစ်သီးကိုဆိုင်ကယ်စက်ပြင် ပတ်သက်. Discovery Channel ကိုအသစ်တစ်ခုစီးရီးကိုထုတ်လုပ်ကြသည်. ကျနော်တို့ခြောက်လ feature (6) သုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစီးရီးကျော်စက်ဘီး, တစ်ဦးချင်းစီဇာတ်လမ်းတွဲငါတို့သည်အချို့သောတကယ်တော့စစ်ဆေးခြင်းကိုလိုအပ်ပါတယ်သောမော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် ပတ်သက်. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဝေမျှဖို့စီစဉ်. ငါယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ပွနျလညျထူထောငျအခြေအနေတစ်ဦးဆိုင်ကယ်၏တန်ဖိုးဆုံးဖြတ်ရန်သုတေသနလုပ်နေတာငါ. ပထမဦးဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် 1931 တစ်ဦး Brough Superior ဆိုက်ကားနှင့်အတူပွိုငျဘမော်ဒယ် X ကို. ငါဆိုင်ကယ်နှင့်ပွနျလညျထူထောငျဓာတ်ပုံများမီနှင့်အပြီးပူးတွဲင့်. သင်ဤစက်ဘီးကြိုတင် / post ကိုပွနျလညျထူထောငျလေ့လာပြီးနိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အဆက်အသွယ်၌ငါ့ကိုထားနိုင်သလား? ကစက်ဘီးပကတိဖြစ်လေ၏ဘယ်လိုများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိရှိခြင်းမရှိဘဲအမှန်တကယ်တန်ဖိုးအားပေးဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မည်ငါနားလည်, အဘယ်အရာကိုထုတ်ကုန်အသက်ပြန်ရှင်ဖို့ကဆောင်ကြဉ်းရန်အသုံးပြုခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်. သို့သျောလညျး, တစ်ဦးအမြင်အာရုံအကဲဖြတ်အတူ ballpark ပုံ Discovery Channel ကိုကြည့်ရှုသူမှတိကျသောသတင်းအချက်အလက်များပံ့ပိုးကူညီနိုင်. ...
Moto Morini Kanguro နှင့် Dart – Classi ...
Moto Morini Kanguro နှင့် Dart လူအများစုဟာလူသိများတဲ့ Morini အားကစားသို့မဟုတ် Strada မော်ဒယ်များတဦးအဘို့အဆူဖြိုးလေ့. ဒါပေမယ့်စကေး၏ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးစွန်းမှာသငျသညျ super-ချောမွေ့ပြောင်လက် Dart ကိုရှာဖွေခြင်းနှင့် rufty-tufty Kanguro လိမ့်မယ်. ဒါကြောင့်ဘယ်လိုကဲန် Philp နှစ်ဦးစလုံးပိုင်ဆိုင်မှကြွလာခဲ့ပါဘူး? ကျွန်မပထမဦးဆုံးအတွက် Earl တရားရုံးမှာ Kanguro ကိုမြင်လျှင် 1982, ဒါကြောင့်တစ်ဦးကိုချွတ်-လမ်း V-အမွှာခဲ့သကဲ့သို့သဘောကျခဲ့သည်. ငါအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာရှိခဲ့ 1984, ဒါကြောင့်အများအပြားစက်ဘီးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့နှင့်ဤတဦးတည်းဝယ်ယူတယ်, NLM ဆိုင်ထဲမှာခဲ့သောပထမဦးဆုံး Kanguro. ငါကမှလိုချင်အခါတိုင်းပဲသွားထားရှိမည်! ဒါဟာချွတ်-လမ်းငါ့ကိုအပျော်အပါးတွေအများကြီးပေးခဲ့တယ်, ၎င်း၏အလေးချိန်၏ကြားမှ, ငါ shortie ပေါ့ – 5'' 5. ငါသာထဲမှာဖယ်ရှားပစ်တယ် 2003 ငါသာရှိသည်ကြောင့် 15% အဆုတ်စွမ်းရည်ယခု. ငါကအကြောင်းကြိုက်နှစ်သက်မဘာမှရှိခဲ့သည်ငါမပြောနိုင်ပါဘူး. ငါအန်ဒူရိုများအတွက်အသုံးပြု, လမ်းကြောင်း-စီးနင်း, Weston သဲသောင်ပြင်လူမျိုး, ခရီးဝေးစမ်းသပ်မှုတွေ, နောက် ... ပြီးတော့, နှင့်တစ်ကြိမ်ဖုံးလွှမ်း 720 မိုင်အတွက် 20 တစ်ဦး MCC ဖြစ်ရပ်အပေါ်နာရီ. စုစုပေါင်း၌ငါအကြောင်းကိုဖုံးလွှမ်း 16,000 မိုင်. အဘယ်သူမျှမအစစ်အမှန်ပြဿနာများရှိခဲ့သည်, ငါ့အမှားခဲ့ကြသည်သောသူတို့ကိုသာ! တစ်ဦး Kanguro ဝယ်ယူမည်သူမဆိုပထမဦးဆုံးက X-မော်ဒယ်များ၏ရှင်းလင်းသောကိုစောင့်ရမည်. အဆိုပါ X1 နဲ့ X2 tubular ဘောင်များ, လက်ျာ footrest အမှတ်မှာက X ဒါကိုတော့ frame ကို. အဆိုပါ X1 သည်ရှိအားဖြည့်ထားပါတယ်. အဆိုပါ headlamp သာ AC အတိုက်ရိုက်အလင်းဖြစ်၏, ဒါကြောင့် output ကိုအင်ဂျင်ကိုမြန်နှုန်းနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသည်. ဒါဟာအစ 6-ဗို့အလင်းရောင်သည့်စနစ်ရဲ့, အလွန်သေးငယ်တဲ့ဘက်ထရီနှင့်အတူ! ဒါကြောင့်, အသစ်သောထံမှ Kanguro ပိုင်ဘဲလျက်, ငါတကယ်မော်တာနှင့်အတူအလွန်သဘောကျခဲ့သည်. ထိုအခါအကြှနျုပျသစာနယ်ဇင်းများတွင်သစ်တစ်ခု Dart ၏ဓာတ်ပုံကိုမြင်လျှင်, နှင့်မဟုတ်ခဲ့ ...
ကိုယ့်အခြား WordPress.com ဘလော့ဂျ 2004 Big Dog Ridgeback Fonzie ပြောပါတယ်: ငါ Ridgeback စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်တွေ့ရှိ, ဟောက်ခြင်းနှင့်ကျောရိုးဉျြးဖဉျြး - ပြန်, ့အတူတူရမ်းပြီးငါ့အကျောရိုး discs တွေကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ, (အကောင်းတစ်လမ်းအတွက်) - တင်းကျပ်ရဟတ်ယာဉ်အဆင်ပြေဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်နှင့် Hard-assed biker အမျိုးအစားများကိုတစ်ဦး raucous ၎င်းတို့၏နာကျင်မှုသည်းခံစိတ်ကိုပြလိုခြင်းနှင့်အကြီးအကျယ် kinda လမ်း chromed ကြသည်မဟုတ်. ဟုတ်ကဲ့, ငါ Motorcycle.Com တကယ် biker နောက်ဆုံးပေါ်သံမြင်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးဖတ်ရှုဖို့လာရာအရပ်မဟုတ်ကြောင်းကိုငါသိ၏, ငါကကူညီပေးနိုင်ပါသည်လျှင်မူကား၎င်းတို့သည်လိမ့်မည်. သင် Concours ချစ်နိုင်မည်ဆိုပါကမော်တော်ဆိုင်ကယ်ဆိုင်ကယ်ဖြစ်ကြပြီး, တစ်ချိန်တည်းမှာကပွုနေစဉ်, အဆိုပါရဟတ်ယာဉ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကနေလာမယ့်နေကြသည်ရှိရာအရပ်၌သင်တို့ဖြစ်ကောင်းနားလည်. ဒါကြောင့်နောက်တဖန်, ဟုတ်ကဲ့, ဒီမော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပါသည်! သူတို့အားရာတေးသံ spandex စီးနင်းဘောင်းဘီတိုများနှင့်အကာအကွယ်ခွက်ယောက်ျားလေးများမိန်းကလေးတွေထွက်တူး, ဒီမော်တော်ဆိုင်ကယ်သငျသညျကိုချိုးဖျက်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်. သင်တို့ရှိသမျှသည်သင်၏-bits နှင့်အတူဆက်လက်ရှင်သန်လိုလျှင်နဂိုအတိုင်း, သငျသညျ Ok ... ဖြစ်နိုင်သငျနှငျ့အတူကျန်ခဲ့သည်ထက်အနည်းငယ်ပိုပြီးဖုန်းနံပါတ်နှင့်အတူအိမ်ပြန်လာလိမ့်မယ်နှငျ့သငျအကယ်စင်စစ်ကလေးတွေမှပြောပြရန်အလွန်ကြီးစွာသောပုံပြင်ရှိသည်လိမ့်မယ်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလေးတွေ, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ buddy '' em စကားကိုနားထောငျဖို့ခစျြလိမျ့မညျ. သင် Boulevard အပေါ် Ridgeback ရဲ့သေးငယ်တဲ့အရံအကြံပေးအဖွဲ့မှကျေးဇူးတင်စကားသောင်တင်နှင့်သင်တယ်တစ်ခုတည်းသောအရေအတွက်ညီအစ်ကိုများကလပ်ကနေတချို့ dude ၏အိမ်တော်ဖို့ပဲခဲ့ကြသည်အချိန်အကြောင်းကိုတ မှလွဲ.; ထို့နောက်အဘယ်သူမျှမကသင့်ပုံပြင်များကိုနားထောငျဖို့လိုသည်. စိတ်မကောင်းပါဘူး, စဉ်းစား. Rolling-နီးပါးတစ် wheelbase နှင့်အတူ9ခြေ 1750cc တစ်ရွှေ့ပြောင်းခံရ, ကြီးခွေး Ridgeback တစ်ဦးခေါင်းကိုပွတ်ဖြစ်ပါတယ် ...
KTM 450 အမိန့် & # မှရရှိနိုင်သောချီတက်ပွဲပုံတူ ...
KTM 450 အမိန့်ချီတက်ပွဲပုံတူရှိနိုင် အဆိုပါ KTM 450 ဆန္ဒပြပွဲပုံတူမကြာမီအများပြည်သူရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်အမေရိကန်ကမှလာမယ့်ပါလိမ့်မည်လျှင်မူကားကမရှင်းလင်းမယ့်. KTM သည်၎င်း၏ 13 နှစ်ဆက်တိုက် Dakar ပြိုင်ပွဲများတွင်အနိုင်ရ notched 2014, မာ့ခ်မေ့မြောနီးပါးနှစ်နာရီရှေ့ကသူ၏အရင်းနှီးဆုံးယှဉ်ပြိုင်ပြီးသွားနှင့်အတူ. အဆိုပါစပိန်ရဲ့လက်နက် KTM ရဲ့တစ်ဦး updated version ကိုခဲ့သည် 450 ဆန္ဒပြစက်ဘီး, လိမ္မော်ရောင်အမှတ်တံဆိပ်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ရာ၏ version တစ်ခုမကြာမီအများပြည်သူရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါ KTM 450 ဆန္ဒပြပွဲပုံတူတဲ့ဒီဇိုင်းသည် frame နှင့် updated Ergonomics features, အသစ်ကနောက်ဘက်ရပ်ဆိုင်းမှုနှင့်ပြိုင်ပွဲ-သက်သေပြ, လောင်စာဆီ-ထိုးသွင်း 450cc အင်ဂျင်ကို. ဆန္ဒပြပွဲတာဝန်များအတွက်ပုံတူအကွာအဝေးတိုးချဲ့ဖို့လည်းတစ်ဦးရှေ့နှင့်နောက်လောင်စာ-pump များနှင့်အများအပြားင့်ကားများနှင့်အတူကြွလာ. အဆိုပါမယ့်စျေးနှုန်း, အောက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်များကညွှန်ပြအဖြစ်, EUR ဖြစ်ပါသည် 24,000, ဤဆောင်းပါး၏စာအဖြစ်ရသောဝန်းကျင်ဖို့ပြောင်းပေး $32,988. အဆိုပါပြိုင်ပွဲပုံတူကိုအမေရိကန်ဈေးကွက်ထဲမှာရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်ရှိမရှိမသိရသေးဒါဟာင်. – MotoUSA Byron Wilson က အဆိုပါ KTM ၏အသစ်မော်ဒယ် 450 စက်ရုံ livery အတွက်ဆန္ဒပြစက်ပြိုင်ပွဲအခြေအနေများအတွက်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုအဖြစ်မော်ရိုကိုချီတက်ပွဲမှာအောက်တိုဘာလအတွင်းက၎င်း၏ပွဲဦးထွက်ကိုဖန်ဆင်း. စက်ထို့နောက် Dakar မှာအဆုံးစွန်စမ်းသပ်မှုအပေါ်တာမှဘာသာရပ်ခဲ့သည်, နှင့်ဆိုင်ကယ် KTM ရဲ့ 13 နှစ်ဆက်တိုက်အနိုင်ရရှိယူ On-board ကိုမာ့ခ်မေ့မြောအတူ 9,000km ပြိုင်ပွဲတလျှောက်လုံးအပြစ်ကင်းစင်စွာအလုပ်လုပ်သွား. အဆိုပါဆန္ဒပြပွဲစက်၏ယခင်မော်ဒယ် 690cc ခေတ်အဘို့တည်ဆောက်ခဲ့သည်နှင့်အမျှ, အခုအသစ်စက်ယနေ့ Dakar ကိုမှကိုက်ညီခံရဖို့တက်မြေပြင်ကနေဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ် ...
2013 သင်္ဘော MV Agusta F3 ပထမဦးစွာစီးနင် – ယူရိုကို C ...
2013 သင်္ဘော MV Agusta F3 ပထမဦးစွာစီးနင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ sportbike ရောင်းအားအခုထက်၏မျက်နှာကိုအတွက်, Boutique အီတလီမော်တော်ဆိုင်ကယ်အမှတ်တံဆိပ်သင်္ဘော MV Agusta က၎င်း၏မကြာသေးမီကဖြန့်ချိ F3 အတူဝင်ပြီး middleweight supersport စျေးကွက်အားကောင်းလာစေပြီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်. တစ်ဦး Ultra-ကျစ်လစ်သိပ်သည်း 675cc သုံးဆ-ဆလင်ဒါအင်ဂျင်ကိုအားဖြင့် Powered, အဆိုပါ F3 ($13,999) အထွတ်အနေဖြင့်အထွတ်မှရောက်လာရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအပေါ်အခြားဥရောပယူဖြစ်ပါသည်. ဗွီး Reality လာ လေးနှစ်အစောပိုင်းကမွေးဖွားခဲ့ပြီး, အဆိုပါ F3 သင်္ဘော MV ရဲ့နှောင်းပိုင်းတွင်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့အိပ်မက်ဖြစ်ပါသည်, Claudio Castiglioni, အဘယ်သူသည်ကင်ဆာမှသည်ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီရွေ့သွားကွယ်ပျောက်မတိုင်မီသုံးဆလင်ဒါ sportbike ပြန်တမ်း. လမ်းပြိုင်ကားအတွက်၎င်း၏နက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ်သမိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား, သင်္ဘော MV အဖြစ်အစောပိုင်းလာမယ့်ရာသီအဖြစ်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြိုင်ကားစီးရီး - စက်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့် World Supersport ၏တောင်းဆိုချက်များကိုများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်. ၏ပိုလျှံအတွက် 20 သန်းယူရိုမြောက်ပိုင်းအီတလီမှာသင်္ဘော MV ရဲ့ဌာနချုပ်မှာအိမ်တော်၌ဆောင်ရွက်တစ်ခုလုံးကိုဒီဇိုင်းနှင့်အတူစီမံကိန်းသို့ funneled ခဲ့သည်. အဆိုပါ F3 ၏အဓိကအရည်-အအေးဖြစ်ပါသည်, 12-အဆို့ရှင်ဦးခေါင်းကိုနှင့်အတူအင်လိုင်းသုံးဆလင်ဒါအင်ဂျင်ကို (အားလုံးအဆို့ရှင်တိုက်တေနီယမ်ကနေလုပ်ကြံနေကြတယ်) အမွှာကွင်းဆက်-မောင်းနှင် Camshaft အားဖြင့်ပတ်ချာလည်. တစ်ခုချင်းစီကိုဆလင်ဒါ၏အတော်လေး Over-စတုရန်းထွင်းဖေါက်ခြင်းနှင့်လေဖြတ်ခြင်းအတိုင်းအတာကိုအသုံးပြုသည် 79.0 x က 45.9mm, တစ်အချိုးမှလောင်စာဆီတာဝန်ခံဖျစ်ညှစ် 13:1. အဆိုပါအင်ဂျင်ရဲ့အောက်ဆုံး-ဆုံးလက်ကိုင်နောက်ပြန် spins ထားတဲ့အတွက်ထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းန်ထမ်း. ဒီအမြင့်မားတဲ့အင်ဂျင်ကအမြန်နှုန်းမှာထိန်းရပိုလွယ်အောင်ရွေ့လျားမှုအတွက်မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၏ရှေ့ဆက် inertia ကြားကူညီပေးသည်, သင်္ဘော MV ပြောပါတယ်. အီတလီအရှိဆုံးသောအရာတို့ကိုလိုပဲ, ပုံစံ function ကိုအောက်ပါအတိုင်း ...
အားလုံး directory ကို partitions ကို
အမေရိကန် Ironhorse (21)
Big ထမ်းရွက် (36)
MZ စ (39)
တော်ဝင် Enfield (180)
20.06.2015. စာရေးသူ: dima. ဟာ Off comments အပေါ် ပြောက်: Moto Guzzi နော်ဝေအလှမယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
ပြောက်: Moto Guzzi Norge အဆိုပါ Moto Guzzi Norge အချို့သောအချိန်များအတွက် Tour စက်ဘီးငါ့အသိအမြင်၏အစွန်အဖျားပေါ်မှာခဲ့သည်. စျေးကွက်အပေါ်ပိုမိုဒီကဗျာမော်ဒယ်များတစ်ခုမှာ, ဒါကြောင့်လည်းဖြစ်ပျက် ...
20.06.2015. စာရေးသူ: dima. ဟာ Off comments အပေါ် ပွိုငျဘမော်တော်ဆိုင်ကယ်
ပွိုငျဘမော်တော်ဆိုင်ကယ် အဆိုပါ Marque ၏သမိုင်းအကျဉ်း: ပွိုငျဘ အဆိုပါ Collier ကညီအစ်ကိုတွေအတွက်သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးစက်ကိုတညျဆောကျ 1899, က 1907 အဆိုပါကျွန်းက Man TT ၏လူမျိုးမှာအနိုင်ရခဲ့သည်. အောက်ပါ ...
20.06.2015. စာရေးသူ: dima. ဟာ Off comments အပေါ် Moto Morini Kanguro နှင့် Dart – ဂန္ထဝင်မော်တော်ဆိုင်ကယ် Roadtest – RealClassic.co.uk
Moto Morini Kanguro နှင့် Dart လူအများစုဟာလူသိများတဲ့ Morini အားကစားသို့မဟုတ် Strada မော်ဒယ်များတဦးအဘို့အဆူဖြိုးလေ့. ဒါပေမယ့်စကေး၏ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးစွန်းမှာသငျသညျ super-ချောမွေ့ပြောင်လက်တွေ့ပါလိမ့်မယ် ...
20.06.2015. စာရေးသူ: dima. ဟာ Off comments အပေါ် 2004 Big Dog Ridgeback Motortrend
ကိုယ့်အခြား WordPress.com ဘလော့ဂျ 2004 Big Dog Ridgeback Fonzie ပြောပါတယ်: ငါ Ridgeback စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်တွေ့ရှိ, ဟောက်ခြင်းနှင့်ကျောရိုးဉျြးဖဉျြး - ပြန်, ့ငါ့အကျောရိုးဖြစ်စေခြင်းငှါ, ...
20.06.2015. စာရေးသူ: dima. ဟာ Off comments အပေါ် 2013 သင်္ဘော MV Agusta F3 ပထမဦးစွာစီးနင် – Tampa ဂလားပင်လယ်အော်၏ယူရို Cycle
2013 သင်္ဘော MV Agusta F3 ပထမဦးစွာစီးနင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ sportbike ရောင်းအားအခုထက်၏မျက်နှာကိုအတွက်, Boutique အီတလီမော်တော်ဆိုင်ကယ်အမှတ်တံဆိပ်သင်္ဘော MV Agusta အဆိုပါဝင်ပြီး middleweight supersport အားကောင်းလာစေပြီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ် ...
20.06.2015. စာရေးသူ: dima. ဟာ Off comments အပေါ် Moto Giro Vintage မော်တော်ဆိုင်ကယ်
'66 Sears Gilera 106 အဆိုပါ Moto-Giro ကယ်လီဖိုးနီးယားကွာလအနည်းငယ်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့ဒီအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းစတင်ရန်စုံလင်သောအချိန်ဖြစ်ပါသည်နဲ့ကျွန်မစတင်နိုင်ရန်အလွန်ကြီးစွာသောနေရာရှိသည်. တစ်ဦးက 1966 Gilera 106. ဒါဟာကိုက်ညီ ...
20.06.2015. စာရေးသူ: dima. ဟာ Off comments အပေါ် Blata mini ကို Moto
Blata mini ကို Moto Blata – ရွက်ပေါက်ကြယ်များအဘို့အတောက်ပစက်ဘီး. သင်ရှိသည် blata mini ကို Moto အဘယ်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်., အင်ဂျင် 13HP မှတက်မှကွဲပြားနှငျ့သငျ 50mph မှာတလျှောက်မြန်ဆန်နိုင်ပါတယ် ...
20.06.2015. စာရေးသူ: dima. ဟာ Off comments အပေါ် Bajaj သေစားသေစေသော 220cc ပြန်လည်သုံးသပ်
အစီရင်ခံစာအကြောင်းအရာ Bajaj သေစားသေစေသော 220cc ပြန်လည်သုံးသပ်တင်ပြကူးယူထားသောမှတ်တမ်း Bajaj Avenger 220cc ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း ငါတို့သည်သင်တို့မှ Avenger ၏ပစ်လွှတ်၏အတည်ပြုခဲ့သည်သတင်းယူဆောင် 220 ဇွန်လ 15 ရက်နေ့တွင်နှင့် ...
1969 BSA 441 ဗစ်တာအထူး – ဂန္ထဝင် Britis ...
20.06.2015. စာရေးသူ: dima. ဟာ Off comments အပေါ် 1969 BSA 441 ဗစ်တာအထူး – ဂန္ထဝင်ဗြိတိန်မော်တော်ဆိုင်ကယ် – မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဂန္တဝင်
ဆက်စပ်အကြောင်းအရာ barry Porter ရဲ့ Benelli SEI 750 barry ပေါ်တာပိုင်ဆိုင်နှင့်သူ၏ Benelli SEI စီးနင်းဆြေးြေိံး 750. ebay မှာတွေ့သည်: 1963 BSA Thunderbolt မျက်နှာကြက်ကတဆင့်လှည့်လည် ...
20.06.2015. စာရေးသူ: dima. ဟာ Off comments အပေါ် 1991 ဘီအမ်ဒဗလျူ 850 V126မြန်နှုန်းမူလစာမျက်နှာစာမျက်နှာ
1991 ဘီအမ်ဒဗလျူ 850 V126အရှိန် 1991 ဘီအမ်ဒဗလျူ 8506အရှိန်. 28K သည်မိုင်, အသစ်သောကတည်းကစုဆောင်းပိုင်ရှင်သမိုင်း. တစ်ဦးရဲ့အကောင်းဆုံးနျြဥပမာတစ်ဦးအဖြစ်အများကသိကြ 8 စီးရီး, ဒီကားခဲ့ ...
20 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2009 ဟွန်ဒါ CB1000R လမ်းမကြီးစမ်းသပ်ခြင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း- ဟွန်ဒါ CB1000R မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ
2009 ဟွန်ဒါ CB1000R - လမ်းမကြီးစမ်းသပ်မှုတားမြစ်ပျော်စရာ: သငျသညျမဝယ်နိုင်အကောင်းဆုံးဟွန်ဒါ! အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့ကောင်းတဲ့ရဟတ်ယာဉ်ကိုတည်ဆောက်ဘို့ဟွန်ဒါဖို့ကျားကန်. ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုအစဉ်အဆက်အလွယ်ကူဆုံး-to-စီးနင်း Full-size ကို Two-ဘီးတဦးဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်တစ်ခု Auto-Trans-တပ်ဆင်ထားမော်တော်ဆိုင်ကယ် / Scooter ကဲ့သို့သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိရိယာတစ်ခုပေးခြင်းများအတွက်ဗိုလ်မှူးအကြွေး. ဒါပေမဲ့, ရိုးရိုးသားသား, ဟွန်ဒါ, သင်သည်အဘယ်ကြောင့်အကြှနျုပျတို့ကိုထုတ်ကိုင်ပြီးနေကြတယ်? စည်းချက်မြန်အီလက်ထရွန်နစ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဥရောပတိုက်တွင်ယင်း၏နိဒါန်းပေါ်မှာ CB1000R ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်. တကယ်တော့, ဒီ CBR1000RR-based အဝတ်အချည်းစည်းစက်ဘီး 2008 ရဲ့ဒုတိယပြီးဆုံး ...
20 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166
Honda 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 အဆိုပါဟွန်ဒါ RC166 အပေါ်ဆက်ဖတ်ရန် 250/6. Grand Prix ပြိုင်ကားအစောပိုင်း 1960 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးတော်လှန်ရေးခံယူ. ဟွန်ဒါရဲ့ခြောက်ဆလင်ဒါလျင်မြန်စွာစုဝေးရောက်လာကြ၏. အဆိုပါဟွန်ဒါ RC166 ခြောက် Cylinder ၏အသံထွက်ကိုစစ်ဆေးပေါင်း crank အောက်က link ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု. တချိုမြိန်အသံဆိုင်ကယ်ဖြစ်ပါတယ်. ငါမရောက်မှီအလယျပိုငျး-အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်နှစ်ပေါင်းအပေါ်တဦးတည်းကိုကြား. ဒါဟာကိုစေလွှတ်. Le Mans ပေါင်းထုတ်လုပ်မှုစက်ဘီးဖို့ရော်ဘာအဖြစ်. ဟွန်ဒါသင်္ဘောခြောက်ဆလင်ဒါ DOHC ယင်း၏နဲ့အဖြစ်မှန် powerplant စေသွားလေ၏. ဟွန်ဒါဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေတဲ့ ...
ဟွန်ဒါ CBR 600RR 2009 ကို C-ကို ABS ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း 280km / h Make ရန်ကဘယ်လို & ဧဝကိုလုပ်ပါ ...
20 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် ဟွန်ဒါ CBR 600RR 2009 ကို C-ကို ABS ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း 280km / h Make ရန်ကဘယ်လို & အရာအားလုံးလုပ်ပါ!
ဤဗီဒီယိုကိုသင်အကြောင်းကိုအဘယ်သို့မှတ်ထင်ကြဘူး? Zsotyesz87: မှတ်ချက်အရွက် na:: D izaky2011: ပဲငါ့ခမည်းတော်စက်ဘီးနဲ့တူ! Jhon Camille Vergel: ဤအ QE မိတျဆှေအတွက်မိဘများ? ငါ sertgent: r6 ဝမ်ဒါ bediang80: သင်သည်သင်၏အင်ဂျင်ဒါမှမဟုတ်ဘာကိုမှုတ်ကဘာလဲဆိုတာ?? Fr3shChriS13: ok ဈ ima တစ် Yamaha r6 get ထင်. 2006 တစ်ဦးက start များအတွက် vin သံမဏိ: သန့်ရှင်းသောဘုရားမထင်မှတ်သောကျွန်မစက်ဘီးဒါမကောင်းတဲ့ချင်, ဤအမှုသည်ငါ့ကားကိုတစ်ဦးတင့်ကားများကဲ့သို့ကြည့်ရှုစေသည်. Leo motte: သင်တို့ကဲ့သို့ Mano မှခွေးမကနဂါးကိုကိုင်ထားနိုင် 280 လမ်း!!ငါ၏အအိပ်မက် pbmax: စက်ဘီးအံ့သြဖွယ်အသံ. ဂျွန်မုန့်စိမ်း: bullshat ...
20 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2005 ဟွန်ဒါ Silverwing သတ်မှတ်ချက်များ eHow
2005 ဟွန်ဒါ Silverwing သတ်မှတ်ချက်များ ဖြတ်တောက်မှု အဆိုပါ 2005 ဟွန်ဒါ Silver, Wing နှစ်ခုဖြတ်တောက်မှုအတွက်လာမယ့်နှစ်ခရီးသည်တင် Tour Scooter ဖြစ်ပါတယ်, အဆိုပါငွေ Wing အခြေစိုက်စခန်းမော်ဒယ်နှင့် Silver, Wing ကို ABS. ယင်းကို ABS မော်ဒယ်အနက်ရောင် / ငွေနှင့်တိုက်တေနီယမ် / ငွေအ duotone အရောင်ရရှိနိုင်နေစဉ်အခြေစိုက်စခန်းမော်ဒယ်အနက်ရောင်နှင့်တိုက်တေနီယမ်အရောင်ရရှိနိုင်. အဆိုပါကိရိယာ panel ကခရီးစဉ် odometer တူသောအခြေခံအင်္ဂါရပ်များကိုကမ်းလှမ်း, လောင်စာဆီအဆင့်ကိုသတိပေးကာနာရီ. နှစ်ခုမော်ဒယ်များအကြားတစ်ခုတည်းသောအဓိကကွာခြားချက်ကို ABS မော်ဒယ်တစ်ဦးကိုကမ်းလှမ်းကြောင်း ...
20 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Repsol ဟွန်ဒါ – ဗီဒီယိုကိုစွယ်စုံကျမ်း
Repsol ဟွန်ဒါ သမိုင်း [ ပြင်ဆင်ရန် ] တွင် 1995 အဖွဲ့တစ်ထဲသို့ဝင်3Mick Doohan နှင့်အတူမြင်းစီးသူရဲ lineup. အဲလက်စ်Crivilléနှင့်ဟွန်ဒါ NSR500 စီးနင်း Shinichi Itoh. Mick Doohan အာဂျင်တီးနားအတွက်အတန်းအတွက်ဒုတိယအကြိမ်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံရှစ်အနိုင်ရ. တဦးတည်းပြေးပြိုင်ပွဲခုနစ်ခုပြိုင်ပွဲကိုအနိုင်ပေးနှင့်အတူရာသီ၏အဆုံးအဘို့ကျန်ကြွင်းနှင့်အတူ, အဲလက်စ်Crivilléနှင့်အတူစတုတ္ထရာသီပြီးဆုံး 1 Shinichi Itoh ခြုံငုံပဉ္စမပြီးဆုံးစဉ်ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရ. အဆိုပါလေးမြင်းစီးသူရဲကိုလိုင်း-Up အတွက်ဆက်လက် 1997 မိုက်ကယ် Doohan နှင့်အတူ. အဲလက်စ်Crivilléနှင့် Tadayuki Okada ...
19 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Day6 အိပ်မက်ပြန်လည်သုံးသပ်ဆိုင်ကယ်ခရီးဝေးအလုပ်ဆင်း
Day6 အိပ်မက်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း တုရုမြို့တပ်ဦး / နောက် Kenda Komfort 26 x က 1.95 Rim နှစ်ချက်မြို့ရိုးကို, CNC ဘေးနံရံ, ရောစပ် Casette Shimano Derailleur တပ်ဦး / နောက် Shimano Altus 21 အရှိန် Shifter Sram MRX comp + FreeWheel Shimano နောက်ကျောနေ့6custom Injection ကိုပုံသွင်း - lumbar နှင့်ဘက်ပေါင်းစုံခရီးသွားဗူးနှင့်အတူ အလေးချိန်ခန့်မှန်းခြေ 35 34 ဘီးအခြေစိုက်စခန်း 51 " အလေးချိန်အကန့်အသတ် 250 အလေးချိန်ပေါင် မြင်းစီးသူရဲ Size ကို 5'4 "- 6'3" ခန့်မှန်းခြေ မြင်းစီးသူရဲ Size ကို 4'8 "- 5'7" ခန့်မှန်းခြေ အရောင်များကိုဘော့အပြာရောင်, metallic Burgundy ငါ့နေ့ရက်များစွာအတွက် ...
19 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် ဟွန်ဒါတစ်ဦးက New 250cc V-Twin ဆိုင်ကယ်ကြေညာ, အဆိုပါ VTR
ဟွန်ဒါတစ်ဦးက New 250cc V-Twin ဆိုင်ကယ်ကြေညာ, အဆိုပါ VTR ဟွန်ဒါသူတို့ရဲ့သစ်ကို 250cc v-အမွှာ Entry-level ကိုစက်ဘီး၏အသေးစိတ်အချို့သည်ဖြန့်ချိခဲ့ကြ, အဆိုပါ VTR, ငါတို့မတိုင်မီအများအပြားအချိန်ကြားဖူးတယ်သုံးအက္ခရာများတူသောအသံ. ရှုပျထှေးစသော? သငျသညျအောကျဖျောပွသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုဖတ်ရသောအခါကိုသင်မကြာမီရှုပ်ထွေးမှုများမေ့လျော့လိမ့်မယ်. ကျနော်တို့က hard ကိုယျ့ကိုယျကိုအစာအိမ်တွေ့ရှိ, အဆိုပါအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးရပ်ဆိုင်းမှုအစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့အထုတ်ပြန်ချက်များ bumpy လမ်းများထွက်လွယ်ကူချောမွေ့အပေါင်းတို့နှင့်ရက်ကြာစီးနင်းများအတွက်အသစ်များကို VTR ပျော်စရာပါစေနှင့်အတူ. , ကြောင်းသော်လည်းကြားမှ, ကျွန်တော်မ ...
19 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် ဘင်
ဘင်ရဲ့လျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ် (B.E.M) Update ကို 8/12 ဘက်ထရီကိစ္စများကြားမှယနေ့အလုပ်မလုပ်ဖို့စက်ဘီးစီး. ငါ Elite ပါဝါဖြေရှင်းချက်ကနေ 72V LifePo pack ကိုဝယ်ယူ. ဒါဟာအပူချိန်ဖော်ပြပေးသောအသီးအသီးကလာပ်စည်းများနှင့်ကွန်ပျူတာများအတွက်အာရုံခံကိရိယာများနှင့်အတူကြွလာ, ဗို့အား, စွမ်းရည်. ဒါဟာအကြီးအဆင့်မြှင့်ပါပြီသင့်တယ်. သို့သျောလညျး, ငါခြစ်ရာကနေအသစ်တခုဘက်ထရီအိမ်ရာလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာယူနိုင်အောင်ငါအကောင်းဆုံးဂဟေဆော်လုပ်ငန်းဘူး. ထိုအခါငါပြုသောအမှုများနှင့်အရာခပ်သိမ်းကိုတက်နှင့်ချိတ်ဆက်တယ်ပြီးနောက်. ငါကွန်ပျူတာညာဘက်၌ထမှုတ် ...
19 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် ဟွန်ဒါ CBR 150R 2012 စက်ဘီးပထမဦးစွာစီးနင်စက်ဘီး 135cc-165cc Autocar အိန္ဒိယ
ဟွန်ဒါ CBR 150R ပြန်လည်သုံးသပ်, စမ်းသပ်စီးနင်း အဆိုပါ tag ကို "CBR" သေချာပေါက်တစ်ခုထွက်ထွက်-and အားကစားစက်ဘီးဆိုလိုပါဘူး. သို့ဖြစ်., CBR ကလေးမဘယ် character, အဆိုပါ CBR 150R အားကစား? ကျနော်တို့ဟွန်ဒါရဲ့ CBR 250R နှင့်အတူမြင်သည်အတိုင်း, သည် "CBR” နာမတျောကို tag ကိုသေချာပေါက်တစ်ခုထွက်ထွက်-and အားကစားစက်ဘီးဆိုလိုပါဘူး. သို့ဖြစ်., CBR ကလေးမဘယ် character, အဆိုပါ CBR 150R အားကစား? တစ်ဦးကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပထမဦးဆုံးအစီးကိုတရားမျှတစွာစိတ်ကူးပေးခဲ့တယ်. တောင်မှရှည်လျားခက်ခဲသည့် CBR 150R စိုက်ကြည့်ပြီးနောက်, ထိုသို့တစ်ဦးကိုယ်ပွားများကဲ့သို့ပုံရသည် 250. အဆိုပါ Y ကို-shaped headlamp, ...
19 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2006 HONDA VFR800 ကြားဖြတ်
2006 HONDA VFR800 ကြားဖြတ် – #x0024;7650 (မြောက်အမေရိက Denver) ကျနော်တို့နွေဦးမှပိုမိုနီးကပ်စွာရတဲ့နေ. အသစ်တစ်ခုကိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကျော်တစ်ဦးခြေထောက်ပစ်ရန်စုံလင်သောအချိန်! တစ်ဦးက VFR အရာ၏ဤမျိုးများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပါလိမ့်မယ်. ထိုသို့ဖွင့်နိုင်အောင်ဖြစ်ပျက်အဖြစ်, ငါရောင်းချဘို့တရရှိပါသည်! ဒါကြောင့်, သင့် hard-ရရှိခဲ့ပြီးငွေသားလဲလှယ်အတွက်ငါသည်သင်ပြုသောအမှုအနည်းငယ်အရသာကောင်းသောပြုပြင်မွမ်းမံရှိပါတယ်တဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုပေးမည်, အဖြစ်သင့်ရဲ့ပျှမ်းမျှရော့ခ်အဖြစ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ခြင်း. ဤသူသည်ငါပိုင်ပါတယ်ဒုတိယ6မျိုးဆက် VFR ဖြစ်ပါသည်, ...
2WD မော်တော်ဆိုင်ကယ်ခြုံငုံသုံးသပ်ရန် နှစ်ဦးကဘီး drive ကိုဆိုင်ကယ်အခြေခံအားဖြင့်နှစ်ခုကျယ်ပြန့်အုပ်စုများသို့တက်ကွဲနိုင်ပါတယ်; ကွင်းဆက်သို့မဟုတ်ရိုးတံအားဖွငျ့စက်မှု drive ကိုရှိသူများ, ဟိုက်ဒရောလစ်သုံးပြီးအဲဒီ ...
ကျနော်တို့စမ်းသပ်: ဆူဇူကီး SFV 650 Gladius – သေးငယ်တဲ့ crank (ဓာတ်ပုံကို, ဗီဒီယိုက) Mosaicsallthewa…
လောင်စာဆဲလ်အစိမ်းရောင် Tech မှအပေါ်ဆူဇူကီး Burgman Scooter ပြေး – က CNET သတင်း
2007 ကောင်းပြီ BatuCars အဖြစ် Spyker F8-VII မှာရှစ်ဆလင်ဒါအင်ဂျင်ကို
မြင်းစီးသူရဲသင်တန်းနယူးဇီလန် – 0800 LRN2RD – တစ်ဦးမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးသင်ယူပါ, အခြေခံပညာကိုင်တွယ်မှု…
အသစ် S4 ကို Fogarty, အမှန်တကယ်အနေနဲ့ချက်ချင်းဂန္, တစ်ဦးလေးအချိန် WSBK ချန်ပီယံ၏အံ့သြဖွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ခုအခွန်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်. အများဆုံးပိုင်းခြားသိမြင်နိူးများအတွက်တစ်ဦးကအနည်းကိန်းစက်ဘီး. သက်ဆိုင်ရာပညာရပ်တွင်အဆင့်အမြင့်ဆုံး ...
Kawasaki Ninja 650R 2012 ငါစျေး ...
Kawasaki Ninja 650R 2012 အိန္ဒိယတွင်စျေး – အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Bajaj အော်တိုအားလုံးကိုအသစ်ကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် 2012 အဆိုပါ Kawasaki Ninja 650R အထူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြိုင်ပွဲ၏ထုတ်ဝေပြီးခဲ့သည့်အပတ်က. သင်၏ရှင်ဘုရင်သည်သတင်းအချက်အလက်အတွက် ...
2008 Kawasaki Concours 14 အားကစား Tour မော်တော်ဆိုင်ကယ် – အဆိုပါအပြည့်အဝပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း…
Kawasaki Vulcan 1500 Drifter : wiki (အဆိုပါအပြည့်အဝဝီကီ)
အဆိုပါ Kawasaki Ninja ZX-6R eHow အတွက်လောင်စာဆီ Pump စုံစမ်းလုပ်နည်း
မရှိမဖြစ်ဝယ်သူလမ်းညွှန် Kawasaki Z1 နှင့် Z900 – webBikeWorld
Ducati Diavel မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto Moto Guzzi 1000 Daytona Injection စမတ် eScooter အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic Brammo Enertia Bajaj Discover စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် Ducati 60 ဆူဇူကီး Colleda CO သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် Ducati Desmosedici GP11 စက်ဘီး Kawasaki ER-6n Aprilia Mana 850 KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် ဟွန်ဒါ DN-01 ဆူဇူကီး AN 650